I-Northern Comfort yeKhaya- indawo enkulu yale mihla w / ibhedi yaseKumkani
Ngokwenyani iKHAYA elikude neKhaya kunye nendawo ephakathi efikelelekayo. Indawo iyingqayizivele kuba iyamkeleka kwaye ikhululekile kunye ne-decor emangalisayo. Imifanekiso ibekwe kwiindonga ukunika imvakalelo yoxolo kunye nokuphefumlelwa. Inegumbi lokulala eliphangaleleyo nelixhotyiswe kakuhle elinebhedi ye-Kingsize, i-smart tv w/cable, iidrowa zesinxibo, indawo yegunjana, indawo yokusebenzela kunye negumbi lokuhlambela elidibanayo. Inika intuthuzelo kunye nelo khaya likude kumava asekhaya.